5 Nkọwapụta Google Analytics nke na-agaghị atụ gị ụjọ | Martech Zone
Nchịkọta Google nwere ike ịtụ ụjọ maka ọtụtụ ndị na-ere ahịa. Ka ọ dị ugbu a, anyị niile maara etu mkpebi siri ike data siri bụrụ maka ngalaba azụmaahịa anyị, mana ọtụtụ n'ime anyị amaghị ebe ha ga-ebido. Nchịkọta Google bụ ngwá ọrụ dị ike maka onye na-ere ahịa nyocha, mana enwere ike ịbịaru nso karịa ọtụtụ n'ime anyị na-aghọta.
Mgbe ịmalite na Google Analytics, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịpụ apụ gị nchịkọta n'ime aru-sized ngalaba. Mepụta dashboard dabere na ihe mgbaru ọsọ ahịa, ngalaba, ma ọ bụ ọbụna ọnọdụ. Mmekorita nke ngalaba bu isi, mana ichoghi imechi dashboard Google Analytics gi site n’itinye eserese obula ichoro n’ime otu dashboard.
Iji rụpụta dashboard Google Analytics n'ụzọ dị irè, ị kwesịrị:
Tụlee ndị na-ege gị ntị - Nke a bụ dashboard maka ịkọ akụkọ n'ime, onye isi gị ma ọ bụ onye ahịa gị? O yikarịrị ka ị ga-ahụ usoro metrik ị na-enyocha na ọkwa dị egwu karịa ka onye isi gị na-ahụ, dịka ọmụmaatụ.
Zere ịkpa aghara - Zọpụta onwe gị isi ọwụwa nke ịnwa ịchọta chaatị ziri ezi mgbe ịchọrọ ya site na ịhazi nhazi gị nke ọma. Eserese isii na itoolu na dashboard ọ bụla dị mma.
Mee dashboard site na isiokwu - greatzọ dị mma iji zere ọgbaghara bụ site na ịchikọta bọọdụ gị site na isiokwu, ebumnuche ma ọ bụ ọrụ. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịlele ma mbọ SEO na SEM, mana ị ga - achọ ịdebe eserese maka mbọ ọ bụla na dashboard dị iche iji zere ọgba aghara. Ebumnuche dị n'azụ ngosipụta data bụ na ịchọrọ iwelata nsogbu uche, yabụ usoro na nghọta na-apụta n'ahụ anyị. Nchịkọta chaatị dị iche iche n'ime dashboard site na isiokwu na-akwado ebumnuche ahụ.
Ugbu a ị nwere ụkpụrụ nduzi n'uche, lee ụfọdụ ngwa bara uru maka dashboard Google Analytics ọ bụla (Cheta: Ihe eserese dashboard niile bụ nke Google Analytics data na DataHero):
AdWords Dashboard - Maka PPC Marketer
Ebumnuche nke dashboard a bụ iji nye gị nkọwa nke otu mkpọsa ma ọ bụ mgbasa ozi ọ bụla na-arụ, yana nyochaa mkpokọta ego niile ma chọpụta ohere maka njikarịcha. Nwetakwara ego agbakwunyere na ịghara ịpịgharịa na tebụl AdWords na-enweghị njedebe. Nkọwapụta nke dashboard a dabere na ebumnuche gị na ndị KPI, mana ụfọdụ mbido ịmalite iji tụlee bụ:
Na-emefu site na ụbọchị
Mgbanwe site na mkpọsa
Efu site na nnweta (CPA) na-anọ oge
Mgbanwe site na ajụjụ ọchụchọ jikọtara
Ọnụ ego kachasị ala maka nnweta (CPA)
Dashboard Ọdịnaya - Maka Ahịa Ọdịnaya
Blọọgụ abụrụla ihe dị mkpa maka ọtụtụ mbọ SEO dị ka ndị ahịa. A na-ejikarị gị eme ihe dị ka igwe na-eduga igwe, blọọgụ nwekwara ike ịbụ mmekọrịta mbụ gị na ọtụtụ ndị ahịa gị ma jiri isi maka akara aha. N'agbanyeghị ebumnuche gị, gbaa mbọ hụ na ị na-eji ebumnobi ahụ echepụta dashboard gị site na ị na-eleba anya na ọdịnaya, na-eduga ma na-agagharị na saịtị.
Metrik atụ aro:
Oge na saịtị (bibie site na blog post)
Oge site na blọọgụ blọgụ nke post
Ndenye aha site na blog post / udi nke blog post
Ndị na-edebanye aha Webinar (ma ọ bụ ihe mgbaru ọsọ ndị ọzọ)
Oge site na isi / post
Uncegba ụgwọ ọnụego site na isi / post
Dashboard Ntughari Ntughari - Maka Otutu Hacker
Ebe obibi na ọdịda peeji ka enwere ike ịtụgharị - ihe ọ bụla nzukọ gị na-akọwa ntụgharị ga-abụ. Kwesịrị ịbụ A / B na-anwale peeji ndị a, yabụ ịkwesịrị iji nlezianya nyochaa otu ibe ọdịda si arụ ọrụ dabere na ule ndị a. Maka onye na-ere ahịa na-eto eto, mgbanwe bụ isi. Gbado anya na ihe ndị dị ka isi mmalite ntụgharị, ọnụego ntụgharị site na ibe, ma ọ bụ ọnụego ibiaghachi site na ibe / isi iyi.
Oge site na ọdịda peeji / isi iyi
Mgbakwunye ihe mgbaru ọsọ site na ọdịda peeji / isi iyi
Ọnụego ntụgharị site na ọdịda peeji / isi mmalite
Unceba ụba ọnụego site na ọdịda peeji nke / isi iyi
Gbalia iji nlezianya soro ule A / B obula site na ubochi. N'ụzọ ahụ, ị ​​maara kpọmkwem ihe na-akpata mgbanwe ngbanwe ntụgharị.
Dashboard metrik saịtị - maka Geeky Marketer
Usoro ndị a mara ezigbo mma mana ha nwere ike ime nnukwu ọdịiche na njikarịcha saịtị gị. Iji gwuo ala karịa, lee ka esi metụta teknụzụ ndị a na ọdịnaya ma ọ bụ mmekọrịta mmekọrịta. Dịka ọmụmaatụ, ndị ọrụ Twitter gị niile na-esite na mkpanaka gaa na peeji ọdịda ụfọdụ? Ọ bụrụ otú ahụ, jide n'aka na peeji nke ọdịda ka kachasị maka mkpanaka.
Oge ejiri na saịtị
KPI dị elu - maka VP nke ire ahịa
Echiche nke dashboard a bụ ime ka elele anya metrik dị mfe. N'ihi nke a, ịkwesighi ịkọọrọ mmadụ ise dị iche iche n'ime ngalaba gị ka ị hụ ahụike nke mbọ ahịa gị. Idebe data a niile n'otu ebe na-eme ka obi sie gị ike na mgbanwe ọ bụla na arụmọrụ ahịa agaghị achọpụta.
Na-eduga site na isi iyi / mkpọsa
Email ahịa arụmọrụ
Ahụ ike nke olulu niile
Iji gwa ndị ahịa uru nke nzukọ ahụ, anyị niile na-adabere na data. Ọ dị anyị mkpa iji nyocha iji nakọta data ziri ezi, kpughee isi ihe dị mkpa ma gwa ha ndị otu anyị. Ọ bụ ya mere na ị gaghị enwe ike ileghara ngwaọrụ ndị dị mkpa dị ka Google Analytics anya, ọkachasị mgbe ị na-agbaji ya ka ọ na-erikarị nri, dị ka dashboards.
Tags: Mgbasa ozi ịkwụ ụgwọ ụbọchịnchịkọta dashboardsụba ọnụegoibiaghachi ọnụego site na isi iyinchịkọta ọdịnayametrik ọdịnayantughari ntughariusoro ntugharintụgharị ntụgharịmgbanwe site na mkpọsantụgharị site na njụ-ajụjụ ọchụchọcpadike datadataherodatahero dashboardsimecha ihe mgbaru ọsọGoogle Analyticskpiọdịda peeji nkeọdịda peeji dashboardọdịda peeji metricskasị ala cpaahia kpiekwentị mkpanaakasistemụ nrụọrụmkpebi ihuenyosessionsnnọkọ site na postnnọkọ site na isi iyioge na saịtịoge onye ọrụndị na-edebanye aha webinar